Xogahii ugu dambeeyay Shirka fashilka ku dhaw ee Jowhar Xili dalka.. | Gaaloos.com
Home » News » Wararka » Xogahii ugu dambeeyay Shirka fashilka ku dhaw ee Jowhar Xili dalka..
Xogahii ugu dambeeyay Shirka fashilka ku dhaw ee Jowhar Xili dalka..
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar shirkii halkaasi uu ka furay madaxweynaha Soomaaliya ayaa qarka usaaran in uu fashilmo waxaana shirka hareeyay sad-burse iyo Ergada kala dhexshiday dagaal hoose oo salka ku haya Hiiraan iyo shabeelaha dhaxe.
Shirkaani ka socda magaalada Jowhar ayaan soo dhaafin maalintii furitaanka taariikhdu marka ay aheyd 13 janaayo 2016 waxaana hareeyey khilaaf maalinba maalinta ka danbesa sii weynaanayey, kaasi oo ugu danbeyntii cagta la gali doona fashil.
Ergada shirka ayaa intii ugu badneyd waxa ay dib ugu laabteen halkii ay kasoo baqoolen, waxa ayna taasi sabab uga dhigeen in Dowlada Somalia ay faragalin iyo nin jecleysi ay ka dhex wado madasha shirka.
Ergooyinka shirka ka baxay oo siyaabo kala duwan uga hadlay sababta ayaa sheegay inay saluugeen qaabka shirka loo maamulay iyo qoondada la siiyey.
Ergooyinka shirka ka baxay ayaa sidoo kale sheegay in gabi ahaan aysan dib ugu soo laaban doonin madashada, waxa ayna taasi sabab uga dhigeen inaysan jiri cid iska xilsaartay wanaagii laga filaayay in shirka laga gaaro.
Shirkaani ayaa waxaa xili hore diidanaa beelaha qaar ee kasoo jeeda Gobolka Hiiraan.
Beelaha Hiiraan ayaa waday qorsho ah in shirka ay ku qabtaan Beledweyne, iyaga oo qaarkood u ololeynaya in loo oggolaado in ay si toos ah u hoostagaan Dowladda Federaalka, taas oo dastuurku u oggolaanayo.
Title: Xogahii ugu dambeeyay Shirka fashilka ku dhaw ee Jowhar Xili dalka..